Xawaalada Olympic Express. ee wadanka Sweden oo Heshay Sharci lacag dirista Somali News Hees
Xawaalada Olympic Express. ee wadanka Sweden oo Heshay Sharci lacag dirista Jimco 25 May 2012 SMC
Xawaalada Olympic Express. ee wadanka Sweden oo Heshay Sharci lacag dirista Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames. Xawaalada Olympic ee wadanka Sweden oo Heshay Sharci lacag dirista Xawaalada Olympic oo siweyn looga isticmaalo aduunka daafahiisa qaasatan wadanka Sweden ayaa dadaal badan ay gashay heshay sharcigii lacag dirada taana waxaa siweyn u soo dhaweeyey macaamisha sida weyn u isticmaalo
Xawaalada Olympic Express. oo siweyn looga isticmaalo aduunka daafahiisa qaasatan wadanka Sweden ayaa dadaal badan ay gashay heshay sharcigii lacag dirada taana waxaa siweyn u soo dhaweeyey macaamisha sida weyn u isticmaalo Sharciga lacag dirista (lag om betaltjänster)
Xawaalada Olympic Express. ee wadanka Sweden waxay Macaamiisheeda la socodsiinaysaa sharciyada cusub ee laga soo saaray midawga yurub oo dhan. Sharcigaas oo qeexaya lacag dirista iyo qaadashada. Sharcigaas oo soo baxay 1 Ogoosta 2010. Laga soo bilaabo xiligaas waxaa dhaqan galay sharci la yiraahdo Payment Services Directive kaas oo oranaya shirkad kasta oo lacag ka shaqaynaysa waa in ay haysataa ogolaanshaha lacag diritaanka.
Xawaalada OlympicExpress. ee wadanka Sweden ayaa waxay noqotay shirkadii ugu horaysay ee heshay sharcigaa muhuumka ah ee lacag diritaanka oo la yiraahdo Eruopean payment Services Directive. Sharcigaasi wuxuu u ogolaanaya Xawaalada Olympic in ay ka shaqayso lacag dirista iyo bixintaba.
Hadaba Gaar Xawaalada OlympicExpress. si lacagtaada si aan cabsi laheen kugu dirta adigoo wax wal wal qabina u gaarsin doonta lacagta aad dirtay wax ka yar 3 daqiiqo
Kala xariir xafiiskeeda
xafiis- 031-543020 mobail-0722621893 ama 0762665707
lyca- 0764494677 ama 0767473908.